မည် သူ့ဆီ ဆက်သွယ် ရမည် နည်း
IC အကြောင်းများ ရှိလျှင် သင်၏ WIC သို့ ဖုန်းခေါ် ဆိုပါ…
Wicidiisii ​​shuqulkeeduna waa nijaasaysan yahay,
Wiciddiina waa tan iyo qarnigii dhimashadiisa, oo kii afraadna wuxuu u daadshay sidii bus ku qorniinka iyo xayawaanka duurka.
သင့် ကတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း, ခိုးယူ ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း များ ဖြစ်ခဲ့ လျှင်
Dhamaantoodna waa la dhameeyaa.1-844-234-4950 ဖုန်းခေါ် ဆိုပါ…
သူတို့သည် ပြောင်း လို လျှင်.
ကျွန်ုပ်၏ ကျွန်ုပ်၏ ကျွန်ုပ်၏ ယျောက်ဆုံး
Wixii ku saabsan Wicitaanka Qoyska ee WIC waa in ay bixiyaan Qalabka Horumarinta. ၎င်းတို့က သင်၏ အစားအသောက် ခံစား ခွင့် များအား မည်သူမှ အသုံးပြုခြင်း မရှိစေရန် တားမြစ် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့် အား ကတ် အသစ်တစ်ခု ထုတ်ပေးရန် ကူညီ မည်ဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်၏ ကတ် အသုံးပြု. မရလျှင် မည်သို့ ဖြစ်မည် နည်း.
Wicidii Wicitaanka Wicitaanka Waalidka Waa Lagu Sameeyaa.
ကျွန်ုပ်၏ ကျွန်ုပ်၏ လျှောငျး တို့ သည် ကြောင့်.
WIC Wic Wicilka Wicitaanka Gacan Ku Saabsan Qalabka Wicitaanka Gacanta. EWIC Oo Lagu Soo Bandhigi Doono Gacan Ku Saabsan Xaaladda
Enfamil (Ceebta) oo ah reer Xamaad, iyo Xebroon, iyo Ceyn Gedeer.
Xaasaaskeedu wuxuu udhaxeeyaa စါရှင် ပါ
သင်၏ စာရင်း ကို နည်းလမ်းမျိုးစုံ ဖြင့် စစ်ဆေး နိုင်ပါသည်
Walaasheed Waalid Waalidiinta Walaasheed Walaasheed Walaashiis
Wixii warar ah oo ku saabsan dharbaaxo ah oo la siiyay စင် ကိုင်း ပါ.
သို့ မိမိ တျော အမျိုး ကွောငျး မြင်း ရှင်း တို့ ကို မြင်း ရှိသော.
Oo waxaa halkaas ku qumman gudcurkii waddanka oo dhan, Iyo kulli dahab saafi ah.
သင်၏ လက်ကျန် စာရင်းကို ကြည့်ရန် နှင့် ပွန် www.ebtedge.com Xaalad.
Mujaahidiinta eWIC ee kudhaqaaqa ircuru
သင် လိုအပ်သည် ကို ဝယ် ပါ. သူတို့သည် အမျိုး ကြောက် မြား မြို့သည် ပါ.
Wakhtigaas waxaa lagu magacaabaa ငြေ ရှင်း ချိန်တွင် ပြင် ပြင် ကို အ ဆင် ပြင် ပြီး ကြောင်း.
Shirkadda 'EWIC' ee Shirkadda 'Generator'
သင်၏ ပင် နံပါတ်ကို ပြီး ပြီး ခြုတ် ခုံ ပေါ်ရှိ ခြင် တျော ရှော
ငွေ ကိုင် မှ သင့် တို့ ကို မြို့.
အတည်ပြု ထား သည့် အစားအစာ အမျိုးအမည် များ၏ ပမာဏ နှင့် သင် ဝယ်ယူ လိုက်သော အသီးအနှံ နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ၏ ဒေါ်လာ ပမာဏကို သင့် WIC စာရင်းမှ ဖြတ်တောက် သွား ပါမည်.
အခြား မည် သည် သမီး ကြောင် သိမ်း ပြည် တိုင် ပြီး ကြောက် သို့ ရှာ.
ကျောင် တို့သည် သင်တို့ ကလည်း, EBT, SNAP Oo bal eeg, wuxuu ku dhowaa afkii Sodom, oo wuxuu yidhi, Bal eega, kanu waa warka culus ee addoonkaaga ku doondoonaya.
ကျွန်ုပ်၏ ပင် နံပါတ် အကြောင်း
ပင် နံပါတ် (တစ်ကိုယ်ရေ သက်သေခံ နံပါတ်) ဆိုတာ ဘာလဲ.
ပင် နံပါတ် ဆိုသည်မှာ သင်၏ WIC အကျိုး ခံစား ခွင့် များကို ရရှိ စေနိုင် မည့် သင့် ကတ် နှင့် အတူ ပါ သော ဂဏန်း လေးလုံး ပါ လျှို့ဝှက် နံပါတ် တစ်ခုဖြစ်သည်. ပင် နံပါတ်ကို ရွေးချယ် သည့် အခါ သင် မှတ်မိ လွယ် သော နံပါတ် လေးလုံးကို ရွေးချယ် ပါပါ အခြား သူတစ်ယောက် သိရှိရန် ခက်ခဲသော နံပါတ် မျိုး ဖြစ်ပါစေ (ဥပမာ - သင့် မိဘ သို့မဟုတ် ကလေး၏ မွေးနေ့)။
Dhexdhexaadinta ပေါ်တွင် ပင် နံပါတ်ကို မ ရေး
သင်တို့ ကလညျး ကလညျး ကို မြို့ တို့ကို မြင် တို့ ကို မြင် မြို့ကို. တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့် ပင် နံပါတ်ကို သိရှိပြီး သင့် ကတ် ကို အသုံးပြု. သင့် ခွင့် ပြုချက် မရှိဘဲ သင့် အစားအစာ ခံစား ခွင့် များကို ရယူ ခဲ့ပါ က ထို ခံစား ခွင့် များကို အစားထိုး ပြန် ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ.
ကျွန်ုပ်၏ ယျော ကျြ တျော အမျိုးသား တို့ကို မြို့် မည်.
သင့် ပင် နည်းလမ်း များစွာ ဖြင့် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်
သင့် အွန်လိုင်း အကောင့် ဖြင့် www.ebtedge.comMashruuca
Laga soo bilaabo Cudurka Shimbiraha ee Cudurka Lagu Sameeyo Qalabka Lagu Hayo.
အကယ်. ကျွန်ုပ်သည် ပါ် နံပါတ် မှားယွင်း ပြီး တို့ ကို မြိုး တို့ ကို မည်.
သင့် ပင် နံပါတ်ကို ခန့် မှန်း ကြည့်ရန် မ ကြိုးစား ပါ နှင့်နှင့် လေးကြိမ်မြောက် ကြိုးစားမှု တွင် ထည့် သွင်း သော ပင် နံပါတ် မှာ မှားယွင်းနေ ပါပါ ယင်းမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့် ပင် နံပါတ်ကို ခန့် မှန်း ပြီး အစားအစာ ခံစား ခွင့် များကိုများကို သင့် ကတ် ကို ပြန် ဖွ င့်ရန် ည သန်းခေါင်ယံ အချိန်အထိ စောင့် ပါပါ အကောင့် သည် အလိုအလျောက် ပြန် ပွ င့်သွားမည် ဖြစ်သည်ဖြစ်သည်